Porn အကဲခတ်အဆိုပါ Shock Effect သင့်ကျန်းမာရေး (UniLad) တွင်ရှိထားသည် - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ယောက်ျားလေးများပျမ်းမျှအားဖြင့်ဖွင့် 10 အသက် porn ရှာဖွေတွေ့ရှိ, သေးသောအဟောင်း 12 နှစ်ပေါင်းမှာအပျိုဖော်ဝင်စတင်နိုင်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ကမ္ဘာအနှံ့ယောက်ျားတွေသန်းပေါင်းများစွာသောသူတို့လိင်တက်ကြွဖြစ်လာသည့်အချိန်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ပြီးသား warped ခဲ့ကြကြောင်း, ဒါဝေးကို real-ဘဝမှာနွေးထွေးမှုကနေ, အွန်လိုင်းကမ်ဘာပျေါတှငျမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခရီးစတင်နေကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။ အဘယ်သို့သူတို့မဆိုပိုကောင်းကိုသိပါ့မလား
မြန်နှုန်းမြင့်, 2006 အတွက်အခမဲ့ streaming porn ၏ထွန်းကတည်းကယောက်ျားနှင့်ယောက်ျားလေးများ unexplained erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အနိမ့်လိင်စိတ်နှင့်အတူအွန်လိုင်းဖိုရမ်များမှယူကြပြီ။
ယောသပ်သည်ဂေါ်ဒွန် Levitt ရဲ့ ဒွန် Jon အားလုံး porn စွဲအကြောင်း ...
porn သုံးရင်၏အခြား key ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, သုတ်ရည်လွှတ်နှောင့်နှေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ, ဆင်းရဲသောအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန် morphed နှင့်အခက်အခဲအိပ်ပျော်နေသော, လှုံ့ဆျောမှုလျော့နည်းသွားသည်။ features အသစ်တွေလည်းပါဝင်
သင်သည်သင်၏ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကသင့်ဦးနှောက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်တစ်စုံတစ်ရာသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းအယူအဆပယ်ချဖို့အမြန်ဖြစ်ပေမယ့်ဂယ်ရီ Wilson က၏စာရေးဆရာစေခြင်းငှါ Porn တွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ဒါကြောင့်ပြန်သင့်ကိုယ်ပိုင်အခွအေနေကနေခြေလှမ်းဖို့ဘယ်လောက်ခက်ခဲရှင်းပြဖို့အလွန်ကြီးစွာသောဥပစာရှိပါတယ်။
သူ၏မျက်စိ-ဖွင့်ပွဲစဉ်အတွင်း ကို TED ဆွေးနွေးချက်, ဂယ်ရီယောက်ျားတွေညစ်ညမ်းသူတို့ကိုထိခိုက်ထင်ပုံကိုတောင်းဆိုနေတာကရေထင်သောအရာကိုတစ်ငါးကိုတောင်းနှင့်တူကြောင်းကိုရှင်းပြထားသည်။
စကားပြော UNILADဂယ်ရီ Wilson ကပြောပါတယ်:
junk အစာစားဆေးလိပ်သောက်တစ်ချိန်ကခဲ့သကဲ့သို့, ပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါဟာအပြည့်အဝကဤပုံမှန်ဖြစ်ရပ်များ၏အန္တရာယ်များကိုနားလည်ရန်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာပါသည်။ ကျနော်တို့ရုံန့်အသတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်း streaming တက်ကြီးထွားလာ၏ရလဒ်များကို၏ရှေ့အစွန်းနှင့် ပို. ပို. လွန်ကဲပစ္စည်းမှအရှိန်မြင့်လာတယ်ဖို့အလားအလာမြင်နေရသည်။
အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဘယ်သူမှမသိသေးဘူး။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ ရွယ်တူချင်းများမှတင်ပြသောအကျိုးကျေးဇူးများကြောင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာမဟုတ်သောလူငယ်များသည် (များသောအားဖြင့်) ဘာသာရေးဆိုင်ရာမဟုတ်သောလူငယ်များလှုပ်ရှားမှုကြီးထွားလာနေသည်။
ယခင်ကညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူနှင့် YouTuber Gabriel Deem တို့အားသူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းမှပြန်လည်နှိုးဆွရန်ကြိုးစားနေသောဗီဒီယိုများရိုက်ကူးနေသူကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့သည်။
အမှန်တကယ်ရှိသူများနှင့်ဆန့်ကျင်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ pixel များကနှိုးဆွမှုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အလိုဆန္ဒအရ ဦး နှောက်၏နှိုးဆွမှုစနစ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အလားအလာရှိသော porn ၏အလားအလာကိုဂါဗြေလကရှင်းပြခဲ့သည်။
ဤသည်ကိုသူတစ်ဦးခေါင်းလောင်း၏အသံမှာစားစရာဘို့ salivate ရန်သူ၏ခွေးအေးစက်သောအိုင်ဗန် Pavlov အားဖြင့်ကျော်ကြားသောစမ်းသပ်မှုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ သာကဒီမှာယောက်ျားလိင်မိမိတို့၏ဖုန်းများနှင့်ကွန်ပျူတာများကိုလိင်ဆိုလိုစဉ်းစားရန်အေးစက်နှင့်နောက်ဆုံးမှာအဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားသို့မဟုတ်အစစ်အမှန်အရာအားဖြင့်နှိုးဆွဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပါဖြစ်လာသည်။
Pavlov ၏ခွေးအနေဖြင့်ဂါဗြေလ၏စကားများအရ '' ယောက်ျားလေးသည်သူ၏ခြေဆစ်များပတ်လည်ဘောင်းဘီနှင့်အတူလက်သုတ်ပုဝါထဲသို့သုတ်လိမ်းလိုက်သည် ''
ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းမှပေါ်ပေါက်လာနိုင်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများမှာ - လိင်တံသည်ညစ်ညမ်းသောအလုပ်နှင့်အလုပ်လုပ်သည်၊ နှောင့်နှေးသည့်သုတ်ရည်လွှတ်မှု၊ ၎င်းသည်ယောက်ျားတစ်ယောက်အားအမြဲတမ်းနေရာယူထားရန်သို့မဟုတ်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ မိမိလက်ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးသတ်ရန်လိုသည်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းမှုကို porn အကြောင်းစဉ်းစားရန်လိုမည်။ အကယ်၍ သင်သည်နံနက်အချိန်၌တဲတစ်ကိုမဆောက်တော့ပါကပြaနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေသောအလံနီဖြစ်နိုင်သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများပါဝင်သည်:, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ (မြင့်သောတူညီ neurochemical အောင်မြင်ရန်အသစ်ကပိုပြီးအစွန်းရောက်အမျိုးအစားများသို့မြင့်တက်) morphing ဦးနှောက်မြူ (ဆင်းရဲသားကိုအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်), အခက်အခဲအာရုံ, lethargy / အနိမ့်လှုံ့ဆျောမှု, အခက်အခဲအိပ်ပျော်နေသောလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။
ဂါဗြေလပေါ်တွင်စကားပြော Watch Chelsea Handler ၏ Netflix ဆွေးနွေးချက်.
ကအထီး porn သုံးရင်မှကြွလာသည့်အခါ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု၏သိပ္ပံနည်းကျဖြစ်ရပ်ဆန်းကစားမှာဖြစ်ပါတယ်: တူညီသောမိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာသူ့ရဲ့လြော့နညျးလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုမှဆန့်ကျင်အဖြစ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်နှင့်အတူတင်ပြလာသောအခါအထီးတိရိစ္ဆာန်များသက်တမ်းတိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုပြ။
သင် porn ကြည့်နေစဉ်မရေမတွက်နိုင်သော tabs များအောက်တွင်မရေမတွက်နိုင်သောဗွီဒီယိုများရှိနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့အစွန်းအထိအထိ erotic အာရုံခံ Overload ၏ထင်ရသောအနက်ဆုံးသောတွင်း။
ဘယ်လိုတဦးတည်းကို real-ဘဝလူတစ်ဦးပင် dopamine လွှတ်ပေးရန်၏အဆင့်ကိုအနီးကပ်လာနိုင်မလဲ?
မိမိအခုနှစ်မှာ ကို TED Talk ကို, ဂယ်ရီတစ်စုံတစ်ဦးက porn အပါအဝင်ဘာမှစွဲသောအခါဦးနှောက်ထဲမှာနေရာအရပ်ကြာသောဓာတုပြောင်းလဲမှုကရှင်းပြသည်။
ပထမဦးစွာ Bing နှင့်တဏှာတစ်သံသရာကိုအားပေးအားမြှောက်ပေးသော (စှဲဖွဲ့စည်းရေးအတွက်အရေးကြီးသော) ဦးနှောက်ဓာတုမြစ်ဝကျွန်းပေါ်-FosB များစုစည်းနေခြင်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ပိုလျှံစားသုံးမှုကလာသော dopamine များပြားလာရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Bing ဆက်လက်လျှင်, ထိုမြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းတစ်ဦးထုံအပျြောအပါးတုံ့ပြန်မှု, Hyper-reactivity ကိုအပါအဝင်အားလုံးစွဲတွင်တွေ့မြင်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည် (အသက်တာ၌အခြားအရာအားလုံးပျင်းစရာကောင်းပုံရသည်, ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းအလွန်အမင်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သည်အဘယ်မှာရှိ) နှင့်လိမ့်မည် တိုက်စားမှု -power ။
တချို့ကသတင်းရင်းမြစ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB အကြံပြုသူတို့ကရှစ်ရက်သတ္တပတ်အမှတ်အသားရတစ်ချိန်ကယောက်ျားတွေအများကြီးကြီးမားသောတိုးတက်မှုတွေ့မြင်ဘာသဘာဝကျပါတယ်ပေးသောညစ်ညမ်းထံမှ abstinence ၏အဋ္ဌမရက်သတ္တပတ်မှဆဋ္ဌမပတ်ပတ်လည်ကျဆင်းမှုတည်ဆောက်ကြလော့။
porn သုံးရင်အစားအစာ, ဘိန်းဖြူ, သို့မဟုတ်အခြားစွဲလမ်းအတိုင်းဦးနှောက်ထဲမှာတူညီတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။
ညစ်ညမ်းခြင်းကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏သည်းခံစိတ်နှင့် ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒအပေါ်မူတည်သည်။
သင်ထိခိုက်နေသည်ကအကောင်းဆုံးပါလျှင်အထဲကရှာတွေ့မှလမ်း (နှင့်မည်သို့မည်ပုံ) လအနည်းငယ်အဘို့ထဲကဖြတ်တောက်နှင့်မည်သည့်အပြောင်းအလဲများစောင့်ကြည့်ကြိုးစားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းသောအလွဲသုံးစားမှုလက္ခဏာများမှပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်လူငယ်များအတွက် ၅ လမှ ၇ လခန့်ကြာသည် (သို့) သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ၂ လမျှသာကြာသည်။ အသက် ၂၀ ကျော်သောအမျိုးသားများသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများကဲ့သို့သူတို့၏ erectile ကျန်းမာရေးကိုလျင်မြန်စွာပြန်လည်ရရှိနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့် ဦး နှောက်သည် dopamine ထုတ်လုပ်မှုနှင့် neuroplasticity တို့၏အမြင့်ဆုံးသောအချိန်တွင်လျှင်မြန်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစတင်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်အသက်ကြီးသူများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ erectile ကျန်းမာရေးကိုလျင်မြန်စွာပြန်လည်ရရှိခြင်းမရှိသေးပါ။
ရိုးရိုးသားသားမရှိနာတာရှည် porn အသုံးပြုသူသူအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုသိသိသာသာကာလအတွက် up ပြုလုပ်ပေးသည်တိုင်အောင်သူ့ကိုထိခိုက်မယ့်ပုံကိုသိတယ်။ အသက်အရွယ် 25 ကတည်းကညစ်ညမ်းဖို့နေ့တိုင်း masturbating ထားပြီးတဲ့သူတစ်ဦးက 12 နှစ်အရွယ်သူကမပါဘဲနှင့်တူကြပြီဆိုတာသိဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ အခြားသူများကအားလုံးမှာထိခိုက်တာဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။
သူတို့အားသက်ရောက်မှုမတိုင်မီဆယ်စုနှစ်တိကျစွာလူသိများကြသည်။ သင်ထိခိုက်စေခြင်းငှါထင်ရှိလျှင်, လအနည်းငယ်အဘို့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဖျက်သိမ်းရေးဖြင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုစေ။
သင်ပူးပေါင်းလိင်ဆက်ဆံကြသည်မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီးသေချာမသိရှိပါက, porn နှင့်အတူ masturbating ကြိုးစား, နှင့်အခြားအခါသမယအပေါ် porn, porn အစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်ခေါ်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ masturbating စမ်းပါ။ သင့်ရဲ့စိုက်ထူခြင်းနှင့် arousal ဒုတိယအခါသမယတွင်ရှိနေကြသည်မဟုတ်လျှင်, သင်ပြဿနာတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ပါသည်။
ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ်လူများသည်လိင်ဆက်ဆံရန်၊ အစစ်အမှန်ဘ ၀ မှကင်းဝေးရန်နှင့်ဆက်ဆံရေးအပေါ်ကြီးမားသောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေရန် porn ကိုအလွန်မှီခိုအားထားနေရသည်မှာထင်ရှားလာသည်။
ယောက်ျားအပေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများအပြင်ခေတ်မီ porn ထံမှလာသည်ဟုအရေးကြီးသောလူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များရှိပါတယ်။
ဘယ်လိုမကြာခဏသင်သည်အမျိုးသမီးအပျြောအပါးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြောင်းလိင်ကွဲ porn မြင်ပြီလော
အင်တာနက်စွဲအထူးကုနှင့်စိတ်ရောဂါ Todd အယ်လ်မတ်ေတာသညျကရှင်းပြသည်:
စွဲလမ်းမှု၏အငြင်းပွားမှုအပြင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုခြင်းကသူတို့၏စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း၊ အခြားသူတစ် ဦး ၏အခန်းကဏ္ ((ထင်မြင်ယူဆချက်၊ အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်) နှင့် 'ပုံမှန်' လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာများအတွက်လက်တွေ့မကျသည့်မျှော်လင့်ချက်များဖန်တီးပေးသည်မှာမငြင်းနိုင်ဖွယ်ရာရှိသည်။ အားလုံးယောက်ျားတွေကြီးမားတဲ့ penises ရှိသည်။
လူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသူတို့ပုံမှန်ကြည့်ရှုလေ့ရှိသောကိုယ်ထိလက်ရောက်ရန်လိုသော 'နည်းစနစ်များ' တွင်ပါဝင်ခြင်း (ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ ခေါင်းရှုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားမိန်းကလေးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရန်လိုခြင်းများ) နှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးပြီးအပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရခြင်းအတွက်အကြံပေးခြင်းသို့သွားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ကြီးပြင်းလာတာနဲ့သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့စိတ်တိုတို့ကြောင့်မဟုတ်တာပါ။
ထိုနည်းတူစွာမိန်းမငယ်များသည်သူတို့၏ချစ်သူရည်းစားများအားကျေနပ်စေရန်အတွက်သူတို့လုပ်ခဲ့သည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးမှုရှိသည်ဟုခံစားရခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့လုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားနေရသည်။ လူအများစုကအချို့သောလုပ်ရပ်များသည် 'ပုံမှန်' လိင်လုပ်ရပ်များမဟုတ်ကြောင်းသတိထားမိကြသော်လည်းမည်သူမျှမပြောခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
လေ့လာမှုတစ်ခု Nebraska တက္ကသိုလ်ကနေ 'လူငယ်များကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတွေ့မြင်သူများသည်အမျိုးသားများအနေဖြင့်ယောက်ျားများကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသည့်အခါအခြေအနေများပိုကောင်းလေ့ရှိကြောင်း၊
'အသိုင်းအဝိုင်းတွေရှိတယ်။Fapstronauts'နှင့်စာမျက်နှာများနှင့် စာမကျြနှာ reboot ပုံပြင်များ၏။ တစ် ခြောက်လ porn-အခမဲ့ဖူးခဲ့သူ 24 နှစ်အရွယ် မြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ်ကြုံနေရပေမယ့်သူစိတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားတိုးတက်မူကြောင်းကိုကရှင်းပြသည်အပြစ်ရှိတယ်, အရှက်ကွဲခြင်းမှလွတ်လပ်မှု, တိုးမြှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှု, လှုံ့ဆျောမှု, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးရှိ, စိတ်ခံစားမှုဥစ္စာဓန, တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် arousal ။
porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်သောသူတို့အဘို့အကွံဉာဏျ, လေ့ကျင့်ခန်းသွားလာခြင်း, ဆငျခွငျနှင့်အတူတူပင်ကြိုးစားနေကြသူအခြားသူများထံမှထောက်ခံမှုရှာသည်။
အောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုအစီရင်ခံ porn တက်ပေးခြင်း၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးများပါဝင်သည်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏လွှတ်, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, တိုးတက်လာသောစိတ်ဓါတ်များ, လျှော့ချစိတ်ကျရောဂါ ပို. အပြုသဘောအမျိုးသမီးများကိုကြည့်ရှုခြင်း, မေတ္တာပါဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ဖို့ သာ. ကြီးမြတ်အလိုဆန္ဒလျှော့ချ, စွမ်းအင်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
porn မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဝေးကလူကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးနှင့်အရငျးနှီးမှုအတွက်သဘာဝလူ့အလိုဆန္ဒနှင့်အ drive ကိုယူပြီးမျက်နှာပြင်မှာညွှန်ကြားနေသည်။
အချို့သူများအတွက်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည်သင်၏ဘဝကိုအကြီးအကျယ်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင်သည်သင်၏တစ်နေ့တာအလုပ်တစ်ခုကိုတစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်ရန်သင်လုပ်ဆောင်ပါက၎င်းအကြောင်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင့်သည်။
သင်မဟုတ်သော်ငြားလည်းစွဲစွဲလမ်းမှုကိုသတိထားမိလာသည်။ အလည်အပတ် porn အကူအညီ, reboot Nationဒါမှမဟုတ် အဘယ်သူမျှမ FAP နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ထောက်ခံမှုအဘို့။